< မျက် မှောက် မြန် မာ နဲ့ ပ ညာ ရေး > - ~ LOOK for more FUNS ~
~ LOOK for more FUNS ~
<< WELCOME >>
<( Home Page of LOOK )>
* FUTURE of Daw Aung San Suu Kyi
< ( Words of Wisdom )>
< ( လူမိုက်ကြီး(၁၀)ယောက် )>
< e-mail address STORY >
< MYANMAR in ABROAD >
< ဘုရား ပစ္စည်း အဆိပ်သီး >
< မျက် မှောက် မြန် မာ နဲ့ ပ ညာ ရေး >
< လို ရာ စီး ပွား တိုး ကြီး ပွား ဖို့ >
< ဆော်ဒီ ကျောင်း သား တစ်ယောက် ၏ e-mail တစ်စောင် >
<( FUNNY RADIO )>
<( BEGGAR )>
<( EAST OR WEST )>
<( EXPLAINATION AT WOMEN )>
<( FAMILY PROBLEM )>
<( JEAN LADY )>
<( OPERATION )>
<( OUR COUNTRY )>
<( TO BE A MODEL )>
<( WHO WAS WRONG ?..2)>
<( WHO WAS WRONG ? )>
<( မလိမ်ရဘူး )>
<( ဥာဏ် ကြီး ရှင် )>
<( ကောသလအိမ်မက် ၁၆ ချက် )>
~ THEY NEEP HELP
~ သေတမ်းစာ ~
~ LOTTO LOVERS ~
~ ဦးခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ) နှင့် သတင်းစာပညာလေ့လာရေးသင်တန်း
site google home page
aungbarsay main page
> Links for MUSIC LOVERS
~ အခမဲ့ ကြော်ငြာ ဝန်ဆောင်မှူ ~
<< domain ဝယ်ယူ လိုလျှင် aungbarsay မှ ကူညီ ပေးမည် >>
You Can Get Paid to Surf the Web!
မျက် မှောက် မြန် မာ နဲ့ ပ ညာ ရေး
၁၅၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၀၈ ရွက်နုဝေ
( 85 years old -Dr. Myint Myint Khin isaremarkable, first female professor of medicine in Burma. She is sharp, sincere and scholarly. )
လူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ အဖိုးထိုက်ရတနာတွေထဲမှာ ပညာနဲ့ ပညာရေးဟာ တန်ဖိုးအရှိဆုံး၊ လူတွေကို အကူညီ ပေးနိုင်ဆုံး ထက်မြက်ဆုံး၊ တန်ခိုးအရှိဆုံး၊ ဒါကြောင့် အ ရေးကြီး ဆုံး ဆိုတာ ထာဝစဉ် မှန်တဲ့ အကြောင်း ဆိုပေမဲ့ အခု ခေတ်မှာတော့ ပိုလို့ မှန်ပါ သေး တော့တယ်။ ပညာတတ်မှုရဲ့ တန်ခိုးအာဏာနဲ့ ဘဝရဲ့ ဘက်စုံမှာ သက်ရောက်တဲ့ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုဟာလည်း ၁ဝ-၁၅နှစ်နဲ့တောင် မတူတော့ပါဘူး။ အရှိန်အဝါ ပိုတက်လာပါပြီ။ ပညာတတ်သူနဲ့ မတတ်သူ နည်းပညာပိုင်းမှာ ကျွမ်းကျင်သူနဲ့ မကျွမ်းကျင်သူရဲ့ ဘဝနောင်ရေးဟာ တကယ်ကွာတာပဲ။ ပညာမတတ် ကျွမ်းကျင်မှု (Technology) မကျွမ်းကျင်တဲ့ သူတွေကတော့ လူ့အလွှာရဲ့ အောက်ဆုံးကနေ အထက်တက်လာဖို့ သိပ်မမြင်ဘူး။
ဒါ လူတိုင်း အသိဖြစ်မှာပါ။ ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့ အခြေခံ အကြောင်းကတော့ ကမ္ဘာမှာ သိစရာ၊ မှတ်စရာ၊ တတ်စရာတွေ နေ့မခြား တိုးပွားနေတာနဲ့ ဒီ တိုးတက်မှု တွေ ပညာအသိ တွေကို ဘဝအတွေ့ ကိုယ်တွေ့၊ လက်တွေ့မှာ အသုံးချ နိုင်အောင် အချိန်မီ အကောင်အထည် ဖေါ်ပေး တီထွင်ပေးနေတာ တကြာင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ အခု ကမ္ဘာ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ကမ္ဘာမှာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ ကဏ္ဍပေါင်းစုံ လူမှုရေး၊ နေ့စဉ် သွားလာ နေထိုင်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး တို့မှာ ချောမွေ့ အောင်မြင် ဖို့အရေး ဒီ (knowledge) ပညာရေး အပေါ်မှာ တည်နေတယ်။
ဒီအသိပညာ (knowledge) ကို အခြေခံပြီး လိုအပ်လာတဲ့ ပြောင်းလဲ ပြုပြင်စရာတွေကိုလည်း လုပ်ပေးရပါမယ်။ ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာနဲ့ လူနေမှု စရိုက် ဟန်ပန်၊ (lifestyle) ဆိုတာ ကလည်း (knowledge-base) ပညာ အရင်းခံ ဖြစ်ရပ် တခုပါ။ တိုးပွား ပြောင်းလဲ လာတဲ့ အကြောင်း အခြင်းအရာကနေ တဆင့်ခံပြီး ဖြစ်ထွန်းလာတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းရှိ လူအားလုံးတို့ဟာ အသိပညာ တိုးပွားကြီးလာမှု၊ ချဲ့ထွင် ကျယ်ပြန့်လာမှုနဲ့ မသက်ဆိုင် မပတ်သက် ပါဘူးလို့ ပြောနိုင်သူ ဘယ်သူမှ မရှိတော့ပါဘူး။
အခုလို (ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း) အခါ သမယမှာ လူတွေရဲ့ တွေးခေါ် အယူအဆနဲ့ ရည်မှန်းချက် ဒီရည်မှန်းချက် တွေကို အကောင်
အထည် ဖေါ်ဖို့ နည်းဗျူဟာနဲ့ နည်းပရိယာယ် တွေကလည်း တသမတ်တည်းလို ဖြစ်လာတယ်။ ဘယ်သူမှ တကိုယ်တော် သီးခြား လုပ်နေလို့ သိပ်မဖြစ်တော့ဘူး။ “Stream Line” ရေစီးကြောင်း ထဲ မဝင် လို့ကတော့ နောက်ကျ ကျန်ရစ်ခဲ့ဖို့ပဲ ရှိတော့တယ်။ အခုလို ဒုန်းစိုင်းပြေးနေရတဲ့ လောကမှာ ကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျဆုံးခြင်းပဲ ရှုံးနိမ့်ခြင်းပဲ။
သိပ်နောက်မကျခင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲကြပါစို့၊ အခုခေတ်ဟာ Information (သတင်းစကား) ခေတ်တဲ့၊ “Information is power” တဲ့။ Information တွေကလည်း ထွက်နေလိုက်တာ ပင်လယ်ဝေပဲ။ များလွန်းတော့ ဘာကို စိစစ်ပြီး လေ့လာထိုက်တယ်ဆိုတာ အဆုံးအဖြတ်
ပေးဖို့လိုတဲ့ အရေးကြီးအချက် ဖြစ်လာပါပြီ။ နောက်ကွဲကွဲပြားပြား သိထားဖို့လိုတာကတော့ Information (သတင်းစကား) ဟာ knowledge (သိမှုပညာ)နဲ့ မတူပါဘူး။ အဆင့်ကွာပါတယ်။ ဒီလိုပဲ နောက်တဆင့်မြင့် ပညာရှိ သုခမိန်ဉာဏ် (wisdom) ရှိဖို့ဆိုတာလည်း ကွာပါသေးတယ်။ ခုခေတ် လူ့လောကမှာ သောကကင်းဝေး နေသွားနိုင်ဖို့ကလည်း Information နဲ့ မလုံလောက်တာတွေ ရှိပါတယ်။ knowledge နဲ့တင်တောင် မပြတ်သေးပါဘူး။ wisdom အထိလိုတဲ့ အပိုင်း တွေလည်း ပါ ပါတယ်။ နေ့စဉ်လုပ်နေရတဲ့ အဆုံး အဖြတ်တွေ (decision making) ဟာ wisdom နဲ့ ယှဉ်ပြီး လုပ်ရမှာတွေ ပါတတ်ပါတယ်။ wisdom ဆိုတာကလည်း မြန်မာဝေါဟာရတခု အဖြစ် သတ်သတ်မှတ်မှတ် မှည့်ခေါ်လို့ မလွယ်ပါဘူး။ ရှိထားတဲ့ အသိအတတ်နဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ဒါတွေကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာတွေနဲ့ ရင့်ကျက်တဲ့ နှလုံးသားနဲ့ ဦးနှောက်ကိုသုံးပြီးတော့ ကောက်ချက်ချလိုက်တဲ့ သဘောထား အယူအဆတွေဖြစ်တယ်။ ဒါတွေဟာ လူတဦး ဘဝတလျှောက် နေရေး လောကအပေါ် ရှုမြင်ခြင်းတို့မှာ တန်ဖိုးပြည့်ဝတဲ့ အဆင့်မြင့် တွေးခေါ် မြော်မြင်မှုဖြစ်လို့ အင်မတန် အရာရောက်တဲ့ အရည်အသွေးပါ။ တမင်တကာ မွေးထုတ် လေ့ကျင့်
ပေးထိုက်ပါတယ်။ အခု ဘွဲ့ရတွေဟာ ပညာရှိ (wise men) တွေ မဟုတ်ကြသေးပါဘူး။ ပညာတတ်လို့ ခေါ်ရမှာတောင် ခပ်ခက်ခက်ပါ။
ဘဝကို ရင်ဆိုင်ရာမှာ အဆင့်မြင်ရပါမယ်။ (thinking) တွေးခေါ်မှု၊ (reasoning) ကျိုးကြောင်း ဆီလျော်စွာ တွေးခေါ်နိုင်မှု (logical deducation)၊ အဆင့်လိုက် အဓိပ္ပါယ် ရှိရှိ ယုတ္တိ တန်တန် တွေးခေါ် ကောက်ချက် ချနိုင်ခြင်း ပုစ္ဆာ အကြီး အသေးကို ဖြေရှင်း နိုင်စွမ်း ရှိခြင်း (problem solving)၊ ပညာနဲ့ ယှဉ်တဲ့ မှန်ကန်တဲ့ အဆုံးအဖြတ်မျိုးပေးနိုင်ခြင်း (decision making) တို့ဟာ အဆင့်မြင့် ပညာသင်တန်းကို အောင်မြင်ပြီးတဲ့သူတွေ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ အရည်အသွေးပါ။ (နောက်ဆုံး အဆင့်ဖြစ်တဲ့ (generation of new idea = synthesis) စိတ်ကူး စိတ်သန်း အသစ်စက်စက် တီထွင်ခြင်း ဆိုတာကိုတော့ မမျှော်လင့်ပါဘူး။ အခုခေတ်နဲ့ လူတွေရဲ့ပညာရေး ကို အပေါ်စီး မြင်ကြည့် မယ်ဆိုရင်၊ ပညာတတ်သူနဲ့ မတတ်သူရဲ့ဘဝဟာ ကွာချင်တိုင်း ကွာသွားတော့တာပဲ။ အသေးစိတ် လိုက်ကြည့်ရင်တော့ တက်ခနိုလိုဂျီ (technology) စိုးမိုးတဲ့ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း လောကမှာ တက်ခနိုလိုဂျီ ကို ပိုင်သူ၊ တတ်သူ၊ အဆင့်မြင့်သူဟာ သာသွားတာပဲ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာ အပြန်အလှန် အကျိုးပြုနေတဲ့ အသိပညာနယ်ပယ်ဟာ ကြီးသထက်ကြီး ကျယ်သထက်ကျယ် ဖြစ်လာတယ်။ ပညာတွေက သင်လို့မဆုံးနိုင်ဘူး။ တတ်နိုင်တဲ့သူတွေ နည်းလာတယ်။ ဒီမှာ အခုခေတ်လူငယ်၊ လူလတ်ပိုင်းတွေအတွက် တွေးစရာပမာ ပုစ္ဆာတခု ပေါ်ခဲ့တယ်။ အနာဂတ်လောက အလယ်မှာ လူကြီး (adult) လုပ်ရမယ့် သက်တမ်းက လူတွေအတွက်တော့ ရှေ့ရေးဆိုတာ ချင့်ချိန်ခွဲခြား စိတ်ဖြာလုပ်ပြီး လေ့လာသုံးသပ်ရမှာတွေ အပြည့်ရှိနေပါတယ်။ ဘဝရှေ့ခရီးကို ယုံကြည်မှု ပြည့်ပြည့်ဝဝ အာမခံချက် ကောင်းကောင်း ဆက်လက် လုပ်ဆောင်
သွားရာမှာ ဘာတွေရွေးလို့ ဘာတွေ ပယ်မယ်၊ ဘာတွေ ဦးစား ပေးရမယ် ဆိုတဲ့ အရေးကြီး ပြဿနာ ပုစ္ဆာတွေ ဖြေရှင်းစရာ တွေရှိပါတယ်။
ဒီလို ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေ တွေကို ပြတ်သား ကြည်လင်စွာ သရုပ် ဖေါ်ပြလိုက်တဲ့ (opinion survey) ကွင်းဆင်း လေ့လာ ချက်ရဲ့ အစီရင်ခံစာတခု မကြာသေးခင်က ထွက်လာတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်လည်းကောင်း လူတွေ (society) ရဲ့ အနာဂတ်ရဲ့ ရှေ့ပြေးပုံရိပ်တွေကို ရေးရေးမြင်လာအောင် လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ ကားချပ်တခုလို့ ခေါ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အရှေ့တောင်အာရှတိုက်ရှိ လူတွေ၊ လူငယ်လူရွယ်
တွေဟာ တပုံစံထွက်နေပါလား ဆိုတာကိုလည်း အတည်ပြု မှတ်တမ်းတင်သလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီလို အတွေ့အကြုံ ဖြစ်ထွန်းမှု တွေ့ရှိချက် ဟာ လုံးလုံး အံ့အား သင့်စေတဲ့ အကြောင်း မဟုတ်ဘူးလို့ ဝန်ခံရပေမယ့် ဖွံ့ဖြိုး ချမ်းသာမှု လှေကားထစ် တွေအဆင့်မှာ အဆင့်နည်းနည်း ကွဲပြားနေသေးတဲ့ ကျမတို့ အိမ်နီးချင်း အာရှနိုင်ငံတွေက ဒီပုံစံ ဒီလေသံ ညီတူဆင်တူလို့ဆိုရအောင် ပုံစံ ရုပ်လုံးပေါ်လာတာကတော့ မလေးရှား၊ စင်္ကာပူ၊ ထိုင်း၊ ဟောင်ကောင်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ တရုတ်ပြည် တို့ဖြစ်တယ်။ စူးစမ်း ခံရတဲ့ သူတွေကတော့ အဲဒီ တိုင်းပြည် တွေက ငွေကြေးတတ်နိုင်သူလူတန်းစား အသက် ၂၅ နှစ်နဲ့ ၅ဝကြား လူပေါင်း ၂,၄ဝဝ ဖြစ်တယ်။ အသက် အာမခံ ကုမ္ပဏီ တခုက လုပ်တာဖြစ်ပြီး ဒီလူတွေဟာ ယခုဘဝဖြစ်ရပ်တွေထဲက အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ သူတို့ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်စဉ် (career)၊ မိသားစုပိုင်းဆိုင်ရာ ခံယူချက် (family) နဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အငြိမ်းစားယူခြင်းအကြောင်းတွေဖြစ်တယ်။ ထူးခြားစွာတွေ့ရတာကတော့ ဒီမိဘအရွယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ အုပ်စုမှာ သားသမီးတွေရဲ့ ပညာရေးကို အထူးအသားပေးပြီး စဉ်းစားကြပါတယ်။ စစ်တမ်းယူထားတဲ့ ငါးရာမျှသော မလေးရှားပြည်သူတွေထဲက ကလေးရှိ
သူများနဲ့ ကလေးယူမယ်လို့ စိတ်ကူးနေသူတွေအတွက်ဆို ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေးဟာ ဦးစားပေး အခံရဆုံး အပိုင်းဖြစ်တယ်။ ၇ဝ % က ဆိုတာက ပညာရေးသာလျှင် သူတို့ကလေးတွေရဲ့ နောင်ရေးအောင်မြင်မှုကို ပေးမှာပါလို့ ဆိုတယ်။ အရေးကြီးဆုံးသော တွေ့ရှိချက်ကတော့ ၃ဝ%သော မလေးရှား တို့ဟာ ကလေးမယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်တဲ့။ အကြောင်းကတော့ ကလေးတွေ ကျွေးမွေး စောင့်ရှောက်ရတဲ့ စရိတ်ကြီး
တာရယ်၊ ယခုဘဝနဲ့ နောင်ရှေ့ရေး မရေရာ မ သေချာ တာတွေ ရှိလွန်းနေတာရယ်၊ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ် (career) ကို ဂရုစိုက် ဦးစား ပေးချင်တာ
ရယ်နဲ့ အခု ကိုယ့် ဘဝ နေမှု ဟန်ပန် (life style) ကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်း သွား ချင်တာတွေ ဖြစ်တယ် လို့ဆိုတယ်။ ဒါ တွေကိုတော့ အလျှော့မပေးချင်ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေပါတယ်။
ကလေးရဲ့ ပညာရေးစရိတ်ကလည်း ကြီးလိုက်တာ သင်စရာတွေကများ မတက်မဖြစ် သင်တန်းတွေကလည်းများ တနေ့တခြား တိုးနေတဲ့ အသိပညာတွေ ဖြည့်ဆည်းဖို့ကလည်း လိုသေးတယ်။ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းတက်ပြီးတာတောင် ပညာသင်ကာလက မပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ ပညာရေးဟာ ဘယ်အရွယ်ကစသလဲ၊ ကလေးတွေဟာ ကျမအမြင်တော့ ၄ နှစ် အရွယ်ဆို လုံးလုံးလျားလျား စနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့လည်း အာရှရှိ မိဘတွေကတော့ ကလေး တွေရဲ့ ပညာရေး ကို သူတို့ရဲ့ဘဝမှာ ဦးထိပ် ထားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးတွေ ပညာရေး အတွက် ဘယ်လို ပေးဆပ် မှု မျိုး မဆို လုပ်မှာပဲလို့ သန္နိဋ္ဌာန် ချထားတယ်။ မြန်မာ မှာ လည်း ရေခြား မြေခြား သွားပြီး အလုပ်လုပ် ကြသူ မြန်မာမိဘ များရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် ကလည်း ကလေး တွေရဲ့ ပညာရေး တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းပဲ။
ပညာကို အမြတ်တနိုးထားရမယ်၊ ပညာသာလျှင် တဦးရဲ့ တိုးတက်မှု အနာဂတ်ရဲ့ ဘဝအောင်မြင်မှုမျိုးစုံကို ပေးမယ်ဆိုတာ ခေတ်အခါခါက သိပြီးသား သံမှိုစွဲပြီးသားခံယူချက်ပါ။ အခုအခါမှာတော့ သိစရာ (knowledge) တွေက နေ့စဉ်နဲ့အမျှဆိုသလို တိုးပွားနေတော့ကျောင်းသားဘဝ
က လွန်မြောက်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်ပါ စဉ်ဆက် မပြတ် ဆည်းပူး သင်ယူ ရမှာဖြစ်တယ်။ မိဘ ဖြစ်နိုင်မယ့် အရွယ် လူငယ် အုပ်စုအတွက် ပိုလာတဲ့ တာဝန်ကတော့ သူတို့ရဲ့ရင်သွေးငယ်တွေရဲ့ ပညာရေးပဲ။ ဒီပညာရေးနယ်ပယ်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ကျယ်ဝန်းပါစေ၊ မိဘတွေ အတွက် ကလေး
တွေရဲ့ ပညာရေး အတွက်ဆို ဘာမဆို ပေးဆပ်နိုင်ပါတယ်လို့ ခံယူထားတာ အနစ်နာခံဖို့ကတော့ အဆင်သင့်ပဲ။
အခုခေတ်ကာလက (knowledge-base cociety) ပညာကို အခြေခံတဲ့ လူ့ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ဖို့ အလွန်လိုပါတယ်။ ဒီလို အခြေမျိုး မဟုတ် လျှင်တော့ တိုင်းပြည် ဟာ ဘယ်လိုမှ တိုးတက်မှု မရှိ တဲ့အပြင် အခုလို အပြိုင် အဆိုင် ခေတ်မှာ ပြုတ်ကျ ကျန် ခဲ့ဖို့ သေချာ ပါတယ်။ (knowledge-base cociety) ဖြစ်ဖို့ အရေး လူမှု အဖွဲ့အစည်း ထဲရှိသူ အားလုံး အလွှာတိုင်းက လူတိုင်း လူတိုင်း တို့ဟာ (literate) စာတတ်ပေတတ် ဖြစ်ရပါမယ်။ ဘွဲ့ရ ဘွဲ့လွန် ရှိဖို့ပြောတာ မဟုတ်ဘူး၊ တတ်ဖို့ သိဖို့ပြောတာ၊ အားလုံးဆိုရာမှာ အိမ်ရှင်မတွေလည်းပါ,ပါတယ်။ ဥပမာ - (welder) ဂဟေဆက် လုပ်သားဆိုပါတော့။ သူ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသက်ဝမ်းကြောင်းအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာတို့မှာ ပညာတတ်(ရှိ) ရပါမယ်။ တနည်းဆိုသော သက်ဆိုင်ရာ scientific literacy ရှိရပါမယ်။ မြင်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်၊ ဝါယာရိန်၊ ဒူးဆစ်၊ ဘိုးရင်း၊ ကလပ်၊ ပါဝါဝင်းဒိုး၊ ဒါတွေဟာ မြန်မာကားပြင်ဆရာ (မက်ကဲနစ်)တွေ ပါးစပ်ဖျားရှိ အင်္ဂလိပ်စကား ဝေါဟာရတွေပါ။ အားလုံးသာ ပညာတတ်တွေဆိုရင် (ပညာတတ်ဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်စာ တတ်ရုံတင် မကသေးဘဲ သိပ္ပံအခြေခံ (ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ)နဲ့ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ရာ ပတ်သက်ကြောင်း
တွေကို ရေရေလည်လည် တတ်သိခြင်းလို့ ပါ,ပါတယ်။) ဒီလိုဆိုရင် ဘယ်လောက် အဆင့်မြင့်သွားမလဲ၊ အဓိပ္ပာယ်ရှိလိုက်မလဲ၊ အလုပ် တွင်ကျယ်
လိုက် မလဲ၊ ဒါ မျိုးကို ဆိုလို တာပါ၊ ဖြစ် စေချင် တာပါ။ လောလောဆယ် မှာ ကျင့်သုံးနေတဲ့ ပညာ သင်ကြားရေး ယခုခေတ် ပညာ သင်ကြားရေး မြင်ကွင်း ကို တထောင့် ကြည့် ရမယ်ဆိုရင်
၁။ နှုတ်တိုက် အာဂုံဆောင်တာကို အလွန်အမင်းသုံးနေတဲ့ စနစ်ထဲ နစ်မြုပ်သွားသူများက အများစုဖြစ်တယ်။ တချို့သော လူထု အစိတ်အပိုင်းရဲ့ သားသမီးတွေက ၄ တန်းက ထွက်ရတယ်၊ အချို့အထက်တန်း အဆင့်မြင့် အထိရောက်တယ်။ ဘဝနဲ့ နေ့စဉ်နေထိုင်နိုင်ရေးမှာလိုတဲ့ (reasoning) ကျိုးကြောင်း ဆီလျော် တွေးခြင်း၊ (thinking) စဉ်းစားခြင်း၊ (problem solving) ပြဿနာ ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းနဲ့ (decision making) အဆုံးအဖြတ် ပေးတတ် ခြင်းတို့မှာ အလေ့ အထ သိပ် မရ လိုက်ဘူး။ အချို့သော အမျိုးသမီး လေးများ ၄ တန်းက ထွက်ရတယ်။ ဒါလည်း မကောင်း ပါဘူး။ အမျိုးသမီးတွေ ပညာတတ်မှ တိုင်းပြည် အကျိုးပိုများတာ။ ဒီအုပ်စု (၁) က မြန်မာ လူထုရဲ့ အများစုဖြစ်တော့ အရေးကြီးပါတယ်။ တိုင်းပြည်ကို ပညာတတ်အောင် လုပ်ရာမှာ သူတို့သာလျှင် အကြီးဆုံးသော ပစ်မှတ်ဖြစ်ထိုက်တယ်။ ပညာရေး စနစ်တခုလုံး အထူးသဖြင့် သင်ကြားပုံ သင်ယူပုံ နည်းစနစ်နဲ့ စာမေးပွဲ စနစ်ကို အထူး ဂရုစိုက်ပြီး ပြုပြင် သင့်တာ တွေကို ပြုပြင် ရပါမယ်။ ဒီ အုပ်စုထဲမှာ အလွန်တရာ သေးငယ်တဲ့ အုပ်စုလေး တွေ့ထားပါတယ်။ အသစ်အဆန်း သမားရိုးကျ မဟုတ်တဲ့ လမ်းစဉ် (innovative) ဖြစ်ပြီး ထူးခြားသီးခြားဖြစ်တဲ့ အစထွင် တီထွင်တာ (innovative) တွေသုံးထားတာရှိပါတယ်။ ကျမသိတာ တနေရာတည်း ဆိုပေမယ့် ဒါကို ဖြန့်ကြက် ပြန့်ပွားလုပ်နိုင်လျှင် ကောင်းမှာပါ။
၂။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာပဲ ငွေကြေးတတ်နိုင်သူတွေက သူတို့ကလေးတွေကို အခြားကျောင်းတမျိုးတွေမှာ ထားကြတယ်။ ငွေအကြီးအကျယ်
ပေးရတဲ့ အဆင့်မြင့် အင်တာ နေရှင်နယ်ကျောင်း သံတမန်ကျောင်းနဲ့ အခြား အခုတလော ဖွင့်လာတဲ့ ခေတ်မီစနစ်နဲ့ သင်ကြတဲ့ ကျောင်းတွေပါ။ တော်တော်များများရှိပါတယ်။ ဈေးအလွန်ကြီးပါတယ်။ မန္တလေးက ကျောင်းတခုဆို လစဉ်ကြေး ကျပ်သုံးသိန်းရှိပြီး ထမင်းကျွေးအတွက် နောက်ထပ် တသိန်းလို့ ဆိုပါတယ်။ ဘယ်လောက် ကောင်းသလဲဆိုတော့ စိစစ်ပြီး မှတ်ကျောက်တင် ထားတာ တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တတ်နိုင်သူတွေ၊ ခေတ်ဆန်သူတွေက တန်းဝင်နေကြတာပဲ။ ဒါတင်မက သေးပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်စာခေတ်မို့ အစိုးရ ကျောင်းတွေက သင်တာ မလုံ လောက်ဘူး ထင်လို့ အင်္ဂလိပ် ကျူရှင် တွေကလည်း အသက် ၄နှစ် ၅နှစ် ကစ ဆယ်တန်း လွန် အထိပါပဲ။ ဒီတော့ စဉ်းစား သာကြည့်ပါတော့။ မိဘ တွေအနေနဲ့ ငွေ ဘယ်လောက် ကုန်လိုက်မလဲလို့ ရှာလို့ မလောက်ပါဘူး။
ပြည်ပမှ မြန်မာကလေးများရဲ့ သင်ကြားရေး
၃။ (က) ပြည်ပမှာ စာသင်နေတဲ့ ကလေးတွေကလည်း မများပေမယ့် တနေ့တခြား တိုးနေပါပြီ၊ မိဘတွေ အလုပ်လုပ်သွားရာမှာ လိုက်သွားတဲ့ ကလေး များဖြစ်တယ်။ မိဘက အထက် မှာဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း တိုင်းပြည်က ထွက်ကတည်းက အရေးကြီးတဲ့ ရည်မှန်းချက် ကတော့ ကလေး တွေရဲ့ ပညာရေး ဖြစ်တယ်။ ချွေတာ ခြိုးခြံပြီး ကလေးတွေ ပညာရေးအတွက် ပုံအောပြီး အကုန်ခံတယ်။ ကလေးတွေကတော့ အသက်အားဖြင့် ငယ်သူ ၅ နှစ် - ၉ နှစ် ကနေ အကြီးတက္ကသိုလ်တန်း တန်းဝင်တွေအထိရှိမယ်။
(ခ) ပြည်တွင်းကမိဘတွေက နည်းအမျိုးမျိုးရှာပြီး ပြည်ပကိုလွှတ်ပြီး သင်သူများ
ဒါ ကလည်း အခုနောက်ပိုင်း ၈ နှစ် - ၁ဝ နှစ်မှာ ပိုများ လာပါတယ်။ အဲဒီထဲက မဆို စလောက် သော သူတွေ အတွက်တော့ ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေးရကြတယ်။ ဥပမာ (စင်္ကာပူမှာ စာသင်ရသော) (ASEAN) မှပေးသောဆု၊ ဘွဲ့လွန်နဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် ကိုယ့်နည်း ကိုယ့်ဟန်နဲ့ သွားသူများလည်း ရှိပါတယ်။ ခန့်မှန်းလို့မရတဲ့ အရေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်မီတဲ့ child psychology အခြေခံ သင်ရိုးတွေနဲ့ သင်တာ လည်း ရှိတယ်လို့ ကြားရတယ်။ ဘယ်လောက် ကျယ်ပြန့်စွာ လုပ်နိုင်တယ် ထိရောက် တယ်ဆိုတာ မသိရပါ။ သိရ သလောက် သင်ရိုး အချို့တွေကတော့ အထက်မှာ ဆိုခဲ့သလို အထင်ကြီးစရာအကြောင်းတွေ ရှိပါတယ်။ ခုနက ပြောသလို ပညာမသင်လိုက်ရဘဲ ရှိနေသူများမှာသာ စိုးရိမ်ရတာ။ များမှာကတော့ သေချာသလောက်ပါပဲ။ လက်ရှိ ပညာရေး အခြေအနေမှာ အုပ်စုချင်း ကွာဟမှုလည်း ရှိမှာ မလွဲဧကန်ဖြစ်တော့မယ်။ အထူးသဖြင့် တိုင်းပြည် အတွက် အလားအလာ ဆိုး လှတဲ့ ကြောက်မက် ဖွယ်ရာ ကွာဟ မှုကြီး ကတော့ ဆင်းရဲသူ အုပ်စုနဲ့ ချမ်းသာသူ အုပ်စု ကွာဟခြင်းပဲ။ အပေါ်ထပ် အင်္ဂလိပ် ကျူရှင်က ဆင်းလာတဲ့ ခပ်ဝဝ ၆နှစ် ၇ နှစ်အရွယ် ကလေး လေးက သောင်းကျော်တန်မယ့် ကျောပိုး အိတ်
ကလေးနဲ့ လာကြို တဲ့သူက လမ်းတဘက်မှာရပ်ထားတဲ့ ကားကနေ ကူးလာပြီး ထီး မိုးပြီး ကလေးကို ကူခေါ်သွားတယ်။ ဆီ ထမင်းသည် ကလေး လမ်းပေါ်မှာ ဆက်ပြီး လျှောက် မသွားခင် ကလေးငယ် ပါတဲ့ ကားက ထွက်သွားတယ်။ ဒါကတော့ အခုခေတ် ပညာသင်ကြားရေးရဲ့ နှစ်ဘက်စွန်း မြင်ကွင်းဖြစ်တယ်။ တတ်နိုင်သူတွေက အဆင့်မြင့် ပညာတွေ သင်ကြပြီး သွားနိုင်သူတွေ သွားလျှင်လည်း တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးဖြစ်လာမှာပဲ။ မတတ်နိုင်သူနဲ့ ကွာဟမှုကို ကျဉ်းသွား စေချင်ရင်တော့ မတတ်နိုင်သူ တွေရဲ့ အဆင့်ကို မြှင့်တင်ပေးဖို့ ပဲ ရှိပါတယ်။
အခုလို အပြောင်းအလဲ မြန်ဆန် လွန်းတဲ့ အခါကာလမှာ လောကအပေါ် ယူဆချက်တွေ ဘဝအပေါ် ခံယူချက်တွေ၊ ရှေ့ရေး (future)
အတွက် မျှော်လင့်ချက် တွေ၊ ဦးတည် နေတဲ့ ပန်းတိုင် ဟာလည်း ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ကမ္ဘာ မှာ တိုင်းပြည် တပြည်နဲ့ တပြည်မှာ နယ်ခြား စည်းခြားဆိုတာ တွေဟာ မှေးမှိန်လာပါပြီ။ လူတွေရဲ့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ပုံစံက မတိမ်းမယိမ်းတွေ ဖြစ်လာတာမို့ နောက်ဆုံး ပုံစံက ပုံစံတူ (stereotype) ဖြစ်သွား တော့ မှာပဲ။ ပြင်ပ တိုင်းပြည်တွေ အနည်းဆုံး အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ တွေကို လှမ်းပြီး ကြည့်ကြည့် ပါဦး လို့ သတိပေး ချင်ပါတယ်။ မြန်မာတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးတာတော့ အမှန်ပဲ။ “ကျွန်တော်သည် အလွန်တော်သော ကျွန်တော်” ဆိုပြီး ကိုယ့်ကျောကိုယ်သပ်ပြီး ချီးမွမ်းခန်းထုတ်ချင်ကြသူတွေ၊ “အခွင့်အရေးသာ ရလိုက်စမ်းပါ မြန်မာပဲ” လို့ ဝင့်ကြွားတာမျိုး အရင်ကတည်းက ကျမ အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ ကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခွင့်အရေး ရအောင် ဘာကြောင့် မလုပ်တာလဲ တကယ် ရရင်ကော တကယ် ကြိုးစား မှာလား လို့ မေး
ချင်ပေမယ့် အကျိုး သိပ်ရှိမယ် မထင်လို့ မမေး ခဲ့ပါဘူး။ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကမ္ဘာ ကို ကျောခိုင်းပြီး အမှောင်ထဲ ပြန်သွား နေတာမျိုး မလုပ်ချင် ပါနဲ့။ လာမယ် ကြာမယ် ဆိုတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ အခု လုပ်နေတာ နည်းလွန်းတယ် နောက်ကျလွန်းတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ အခုခေတ်က ဟိုးရှေးကလို တိုးတက်မှုဆိုတာ ဆယ်စုနှစ်မှ တခါ သိသာလာတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်တိုင်းပြည်ပဲဖြစ်ဖြစ် အထင်ကြီးထိုက်တယ်လို့ကိုယ်က အထင်ရှိရင် အထင်ကြီးရမှာပဲ။ တရုတ်ကို အထင် ကြီးတယ်၊ စင်္ကာပူ ဆို ပိုပြီး အထင် ကြီးတယ်၊ ဒီ တိုင်းပြည်တွေ ယခင်က အတုယူခဲ့တဲ့ အင်အားကြီး ဖွံ့ဖြိုး
ပြီး နိုင်ငံတွေကိုလည်း အထင်ကြီးတာပဲ။ ဒီတိုင်းပြည်အားလုံးရဲ့ မကောင်း ကွက်ကိုလည်း မြင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ မဆန်တာနဲ့ လူ့ အခွင့်အရေး မပြည့်ဝတာတွေလည်း ရှိတယ်။ ယူကေ၊ ယူအက်စ်အေ မှာလည်း ဒီလို ချို့ယွင်းချက်တွေ ရှိတာပဲ။ ဘယ်တိုင်းပြည်မှ ခြောက်ပစ်ကင်း သဲလဲစင် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုဆို သူတို့ ကို အား မကျ ရဘူးလား၊ အတုမယူ သင့်ဘူးလား၊ နည်းတွေ မယူရ ဘူးလား၊ ဒုံးပျံ အဟုန်နဲ့ တိုးတက် နေတဲ့ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ခေတ်မှာ ငြိမ်ငြိမ်ရပ်နေလို့ ဖြစ်မှာတဲ့လား “You have to keep running to be on the same spot” တနေရာတည်းမှာ တည်နေဖို့အရေးက ပြေးနေရတာ။ Alice in Wonderland ထဲက Alice ပြောတဲ့ ခေတ်ပါ။ အမီမလိုက်နိုင်ရင်တော့ အမှောင်ခေတ်ထဲ နောက်ပြန်သွား နေတယ်လို့ ဆိုရတော့မှာပဲ။
ဂလိုဘယ် လိုက်ဇေးရှင်းက တောင်းဆိုလာတာကြောင့် ပညာရေးအပေါ် အမြင် ပြောင်းလဲလာပုံ
ဒီ ဂလိုဘယ် ခေတ်ဟာ သူ့ ထက်ငါ အသာ မခံနိုင်တဲ့ အခါသမယ ဆိုတော့ တိုင်းပြည် တွေဟာ အမြင်တွေ ပြောင်းလာခဲ့တယ်။ ဒီလို
အတွေးအခေါ် သစ်ဆန်းမှုအပိုင်းမှာ အမြဲတမ်း ရှေ့ကပြေးနေတဲ့ စင်္ကာပူကတော့ အရှေ့တောင်အာရှအတွက် မီးရှူးတိုင်လို့တောင် ခေါ်လောက်
ပါတယ်။ ဇူလိုင် ၂ဝဝ၈ အလယ်မှာလုပ်တဲ့ “Asia Pacific conference on giftedness” မှာ စင်္ကာပူ ပညာရေး ဝန်ကြီး ပြောပြသွားတာ
ကတော့ (gifted children) အထူးဉာဏ်ရည် ထက်မြက်တဲ့ကလေးတွေကို ရှာဖွေပြီး မြေတောင်မြှောက်အားပေး ကျွေးမွေးပြုစု လုပ်ရမယ်။ သမိုင်းက အကြိမ်ကြိမ် ထောက်ပြခဲ့တာက အထူးဉာဏ်ရည်ကောင်းတဲ့ လူတစုရဲ့ အကြံဉာဏ် တို့ဟာ သန်းပေါင်း ချီသော လူတွေအပေါ်မှာ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်တယ်။ အခုခေတ်ကလည်း (economy) စီးပွားရေး ကြီးစိုးတဲ့အခါ အီကော်နိုမီမှာလည်း ဆန်းသစ်တီထွင်ထားတဲ့ (innovation) အကြံဉာဏ်တွေ ရှိဖို့ရာလိုတာ။ ဒီတော့ ဘယ်တိုင်းပြည် နိုင်ငံရေး အရောင်အသွေး ဘယ်လိုရှိပါစေ။ ဒီလို (gifted) ထူးကဲ ထက်မြက်တဲ့ကလေးတွေအတွက်တော့ အထူးအစီအစဉ်တွေ လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်တဲ့။ စင်္ကာပူအတွက်တော့ လူ့အရင်းအမြစ်ဟာ တန်ဖိုးအရှိဆိုး အဖိုးအနဂ္ဃထိုက်တန်ဆုံးဟာ လူ့အရင်းမြစ်ပဲတဲ့။ စင်္ကာပူကတော့ ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ၊ (ASEAN) အာဆီယံတိုင်းပြည်ထဲက ကလေးငယ်တွေကို ထောက်ပံ့ကြေး (scholarship) ပေးပြီးခေါ်တယ်။ သူတို့ဆီ နေခွင့်ရအောင် လုပ်ပေးတယ်။ မြန်မာ ကလေးတွေကိုတော့ တော်တော် သဘော
ကျပုံရပါတယ်။ ဒီတော့ ကျမတို့ မြန်မာကလေးတွေဟာ မညံ့ကြပါဘူး။ မှန်ကန်ပြီး အားပေးထောက်ကူမယ့် စနစ်အတွင်း ရှိနေဖို့သာလိုတာပါ။ စင်္ကာပူဟာ ဦးနှောက်အားကိုးနဲ့ပဲ ရပ်တည်ရှေ့သွားတိုးတက်အောင် လုပ်နေတဲ့တိုင်းပြည်၊ ဒီနေရာမှာ သူ့ကို အတုခိုးဖို့ မကောင်းပေဘူးလား။
ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဗီယက်နမ်ကလည်း လူငယ်တွေ ဉာဏ်အရည်အချင်းနဲ့ တောပိုင်းမှ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ပြဿနာ ပုစ္ဆာတွေကို
အလေးပေး ဖို့ ဇူလိုင်လ ထဲလုပ်တဲ့ ကွန်ဖရင့်မှာ ပြောတယ်။ ဗီယက်နမ်မှာ တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ် တွေအတွက် အဲဒီက ထွက် ပေါ်လာတဲ့ ခေတ်မီ ရေး၊ စက်မှု အင်အား ချဲ့ထွင်ရေး အတွက် ကျွမ်းကျင်သူတွေ (technicians)၊ အထူး ပညာရှင် (experts) တွေ လိုပါတယ်။ တိုင်းပြည် က ဒီလိုပညာရှိ၊ ပညာတတ် တွေ မလုံ လောက်ဖြစ်နေတာလို့ဆိုတယ်။ တောပိုင်းနဲ့ စိုက်ပျိုးရေး အပိုင်းကလည်း တိုင်းပြည်အတွက် အရေးပါတာ
တွေ ဖြစ်နေတော့ ဒီအပိုင်းတွေလည်း ပညာရှိ၊ ပညာတတ်၊ ဉာဏ်ထက်မြက်သူ (intellectual) တွေ လိုမှာပါတဲ့။ ဒါမှသာလျှင် တိုင်းပြည်ဟာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မယ်၊ တည်ငြိမ်မယ်၊ စီးပွား အခြေခိုင် လာမှာလို့ ဆိုတယ်။ ခေတ်မီ ရေး စိုက်ပျိုးထွန်းကားရေး၊ စက်မှုအင်အား တိုးတက်ရေးကို ဦးတည် နေတဲ့ ကျမ တို့ တိုင်းပြည် မှာလည်း လူငယ် တွေကို ဒီ ဦးတည်ချက် ပန်းတိုင်တွေနဲ့ ဘောင် ဝင်အောင် ပညာရေး မြှင့် တင်ပေးဖို့ အလွန် လိုအပ်နေပါပြီ။ အခုခေတ်က ဆယ်စုနှစ် တခါဆိုရာမှာသာ သိသာတဲ့ တိုးတက် မှုတွေ အပြောင်း အလဲ တွေ ဖြစ်ပေါ် လာတဲ့ ကာလ မဟုတ်ဘူး။
နေ့မခြား ညမခြား တိုးတက်မှု တွေ အသစ် အဆန်းတွေ ပေါ် နေတဲ့ ခေတ်ပါ။ အချိန်က အလွန် စကားပြော မှာပါ။ ပညာရေး မှာလည်း လက်နှေး လက်တွန့်နေလို့ မဖြစ်ပါဘူး။
လက်တွေ့ ကျကျ အခု လုပ်ပေးနိုင်တာ ဘာရှိ သလဲလို့ မေးရင် ပြုပြင် နိုင်စရာ လေးတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ပညာရေး စနစ် တခု လုံးရဲ့
(orientation) ဦးတည်သွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်း (direction) ကိုဖြစ်နေတဲ့ ရှိနေတဲ့ ဘဝရဲ့ အခြေအနေကို ထပ်ဟပ်အောင် ပြုပြင်ပေးရမယ်။ ကျောင်း ကနေထွက်ပြီး တကယ့်လောကကို ဝင်လာတဲ လူငယ်အတွက် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် ကြီးကျယ်ပြင်းပြတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့ မလိုဘဲ လုပ်ငန်းခွင်မှာ လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်ရှိအောင် လေ့ကျင့်မှု သင်ကြားမှုတွေရှိရမယ်။ ဥပမာပြရရင် အမေရိက တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ သင်တန်း တွေမှာ
သုံးနေတဲ့ (internship) လုပ်ငန်းခွင် အတွေ့ အကြုံ မျိုး အနည်းအကျဉ်းဖြစ်ဖြစ် ပေးတာ၊ ဒီပုံစံကို အခုဆို စင်္ကာပူ တို့လို တက္ကသိုလ် စနစ်
တွေ ကလည်း စသုံးနေပါပြီ။
* ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ မမျှတမှုမျိုး မရှိရလေအောင် အထက်မှာ ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ ပြည်သူကျောင်း အစိုးရကျောင်း
တွေရဲ့ ပညာရေး အဆင့်အတန်းမြှင့်ပေးလျှင်ကို ဒီအချက်ကို အတော်အတန် ကုစားနိုင်ပါတယ်။
* သင်ကြားရာမှာ science and Technology ကို အခုထက်ပိုဦးစားပေးရန်၊ scientific Literacy ကိုမြှင့်တင်ရန်၊ (life skills) လို့
ခေါ်တဲ့ ဘဝမှာ နေနည်း ကို ဦးစား ပေးရန်၊ reasoning skill, critical thinking တို့ကို ဦးစား ပေးရန်၊ တနည်းပြောရလျှင် (teaching,learning method) လို့ခေါ်တဲ့ သင်ကြားပုံ သင်ယူပုံနည်းတွေကို အကြီးအကျယ် ပြောင်းရလိမ့်မယ်။
ပညာဆိုတာ သင်လို့မဆုံးပါဘူး၊ ဒါကြောင့် သင်တန်းဆိုတာလည်း တက်လို့မဆုံးပါဘူး၊ သိစရာ တတ်စရာ အသစ်အဆန်းတွေကလည်း တပေါ်တည်း ပေါ်လာနေတာပဲလို့ ဆိုရမယ်။ အချို့က နေ့စဉ်ဘဝ နေထိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သလို အလုပ်အကိုင်လုပ်ရာမှာ အောင်မြင်ရာ အောင်မြင် ကြောင်းအတွက် ရှိသင့် ရှိအပ်တဲ့ လိုအပ်ချက်တွေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပညာ ကြောကြီးဟာ လိုက်လေ ရှည်လေပဲ။ ဒီလိုမရှိမဖြစ် ရှိထိုက်တဲ့ ပညာ မသိမနေ သင်ရမှာတွေက များတဲ့အထဲမှာ ပင်ရင်း ကျောင်း နေစဉ်က သင်လာခဲ့ရတာတွေကလည်း လုံလောက်
တာမဟုတ်ဘူး။ ပျော့ကွက် ဟာကွက်တွေ ဖြည့်စရာတွေကများ ဆိုတော့ ကျောင်းထွက်ပြီး လူ့လောကထဲ ဝင်လိုက်တယ်ဆိုကတည်းက ထပ်ပြီး
ပညာရှာမှီးစရာတွေ ရှိလာတယ်။ တနည်းပြောရရင် အစဉ်တစိုက် ပညာရှာမှီးရေး (continuing education) ဆိုတာ ယခုခေတ် လူအများစုရဲ့ လိုအပ်ချက် ဖြစ်လာတယ်။ အသက် နည်းနည်းကြီးတဲ့သူအတွက်ဆို ဖြည့်ရမယ့် ဟာကွက်တွေက များလွန်းလို့ အခြေအနေက (cope) အထိန်း
အကျောင်း လွတ်သွားနိုင်တယ်။ ဥပမာ - အခုခေတ်မှာ ကွန်ပျူတာ ကို အနည်းအကျဉ်းမျှ မခေါက်မိရင် ဖြစ်ပါ့မလား၊ လူရာဝင်ပါ့မလား။ အခု အသက် ၆ဝကျော်တွေထဲက ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်သူ ဘယ်နှစ် ရာနှုန်းလောက် ရှိမယ်ထင်သလဲ။ ဒါက အောက်ခြေအကျဆုံးကို ပြောချင်တာပါ။ ကွန်ပျူတာမှာတောင် ဆင့်ကဲ တတ်ချင်စရာ အသစ် အဆန်းတွေက ပေါ်နေသေးတာ။ ဒီလိုပါပဲ အခြား ကဏ္ဍတွေမှာလည်း အကျယ်အကျယ် မငြိမ်းဖွယ်ဆိုသလို သင်လို့မဆုံး လိုက်လို့မမှဖြစ်နေတာပါ။ ဒီတော့ ကျောင်းပြီးသူတွေ ဒီ အသိပညာတွေကို ဘယ်လိုရှာမှီးရမှာလဲ။
ချက်ချင်း သွားပြီး သတိရရမှာတော့ (web) အင်တာနက်ပဲ။ ဒါကတော့ အတိုင်းအတာမရှိဘူးဆိုတဲ့ တွင်း (mine) မိုင်းကြီးပဲ။ နှိုက်လေ ရလေ မဆုံး တော့ပါဘူး။ အင်တာနက်မှာ ဒီလို များပြားထွေလာ ရှိနေတာလည်း အသုံးပြုသူတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ အတား အဆီး ကြီးဖြစ်နေတယ်။ လိုချင်တာ တွေ့ဖို့အရေး လုပ်ရတာတွေက အဆင့်ဆင့် အပြန့်ပြန့် လက်ဝင် လွန်းလို့ တော်ရုံ တန်ရုံဆို စစ်မရောက်ခင် မြားကုန်ချင် စိတ်ပေါက်
လာတယ်။ အချိန်ကလည်း ကုန်လိုက်တာ ဘယ်သူမှ ဒီလို အချိန်မျိုးမပေးနိုင်ပါဘူး။ အငြိမ်းစား အလုပ်မရှိသူ ဆိုရင်တောင်မှ ဒီလို အချိန်မျိုးတော့ ရှာမရဘူး။ အီးမေးလ် (E-mail) တခုတည်း ကြည့်ပါဦး။ Computer ဖွင့်ပြီး စာ မပြန်ဘူး ဆိုတောင် အချိန်တော့ အကုန်သား ။ အင်တာနက်
“လှိုင်း” ကို လျှောစီး (surf) လိုက်မယ် ဆိုရင်တောင် အချိန်က ကုန်မှန်းမသိ ကုန်သွားတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်လိုချင်တာ ကိုယ့် အတွက် အသုံး တည့်မှာတွေကို ဘယ်လိုရအောင် လုပ်မလဲ။ ပထမအဆင့်အနေနဲ့ ဘယ်သူက ရွေးမှာလဲ။ မရွေးပေးရင်လည်း မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ စိတ်မောစရာ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ဒီ web ကွန်ယက်ကို လက်လှမ်းမီသူ မြန်မာလူဦးရေမှာ ဘယ်လောက်ရာနှုန်း ရှိလို့လဲ။
ဒါ့ အပြင်လည်း အင်တာနက် မှာ တွေ့တာတွေက ဘယ်လောက် ယုံကြည်ရမှာလဲ။ (evidence based) အခြေခံ တွေ ဘယ်လောက်
ကောင်းလို့လဲ။ သက်သက်မဲ့ လိမ်ညာ လှည့်စားမှုမျိုး (internet fraud) တွေတောင် ရှိနေမှတော့ ဒီလို မယုံကြည် ရဘူးဆိုတာ ကလည်း သိပ်ကြီးထွားတဲ့ ပြဿနာ ဖြစ်လာတယ်။ အထူးသဖြင့် သိပ္ပံဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေဆိုရင် အထူးသတိထားရပါတယ်။ ဥပမာ ကျန်းမာရေး
အတွက်ဆောင်းပါး သင်တန်းမျိုးစုံလည်း web (အင်တာနက်) မှာရနိုင်ပါတယ်။ ခုနပြောတဲ့ စိစစ်ရွေးချယ် လုပ်ဖို့တော့ လိုမယ်။ ဒီတော့ အချိန်
တော့ ပေးရဦးမှာပဲ။ တချို့ကျတော့ ဒါကို အသုံးချ ပြီး ကြည့်သူ၊ ရှုသူ လွယ်အောင် လုပ်ပေး ထားတာ ရှိတယ်။ ယူအက်စ် မှာဆို ဆေးပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သင်တန်း (course)တွေရှိတယ်။ အောင်ပြီး နှစ်ကြာဆရာဝန်တွေကို ပြန်လည် စိစစ်ပြီးမှ လက်မှတ်ထုတ်ပေးမယ်။ recertification, revalidation ဆိုတာတွေ စတော့မယ်ကြားတော့ အင်တာနက်မှာ သင်တန်းတွေ (training course) တွေ အများကြီးပေါ်လာတယ်။ အဲဒါကို တာဝန်ရှိသူ အဖွဲ့အစည်းတွေက် လေ့လာစိစစ်ပြီး အသိအမှတ်ပြု မပြုဆိုပြီး မှတ်ချက်တွေချပေးတယ်။ အသိအမှတ်ပြုပြီးသားကို တက်ကြမယ်ဆိုရင် အမှတ် (credit)ပေးတယ်။ အသိအမှတ်ပေးတယ်။ ဒီလို အသိအမှတ် အမှတ်များ (credit) ဘယ်လောက်ရှိရင် စာမေးပွဲ အရည် အချင်း စစ်ပွဲ ဝင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ ကြေညာတယ်။ သူ့နည်း သူ့ဟန်နဲ့ ဖြစ်လာ နိုင်တာတွေတော့ ရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ (reader) စာဖတ်သူများမှာ မူတည်ပါတယ်။ သူက ရွေးချယ်စိစစ်ပြီးရင် သူလိုချင်တဲ့ပုံစံပဲ ထွက်လာမှာပဲ။ ဒီတော့ သူ့ကို ရွေးချယ်စိစစ်တတ်အောင် ဘာလုပ်နိုင်သလဲ။ ဒါကို ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပြတ် သင်ကြားရေးသမားတွေက လမ်းညွှန် ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - ဆေးပညာ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဥပဒေ စသည်များ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက် အားကိုးစရာကတော့ ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေဖြစ်တယ်။ ဘာသာပြန်စာပေများ အခုခေတ်မြန်မာမှာ များများ လိုတာတော့ အမှန်ပဲ။ ပိတ်ထားတဲ့ မြန်မာဟာ ကျန်တဲ့ ပြင်ပလောကတခုလုံးက တရှိန်ထို နေ့မခြား ဆိုသလို တိုးတက်နေတော့ ဒီအကြောင်းအရာ အပြောင်းအလဲတွေ မြန်မာပရိသတ် သိမှ ဖြစ်တော့မယ်။ ဒါကြောင့် ဘာသာပြန်စာပေ ကဏ္ဍဟာ မြန်မာပြည် မှာ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သိပ္ပံဆိုင်ရာ အသစ်အဆန်းများနဲ့ အခြားတိုးတက်နှုန်း မြန်ဆန်နေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းများကို ဦးစားပေးထိုက်ပါတယ်။ ဘာသာပြန်သူများကလည်း အခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ ဘာတွေ ရေပန်းစားပြီး အဲဒီအထဲ မြန်မာတွေ စိတ်ဝင်စားမယ်ထင်တာတွေကို ရွေးကြရတော့မှာ အမှန်ပဲ။ ကမ္ဘာ့ပြဿနာ
တွေ ဖြစ်လာတဲ့ climatic change, environment, ecology တွေဟာ အဲဒီအထဲ အကျုံးဝင် မယ်ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း ဒီလိုအပ်ချက်မှာ အချိန်ကာလ အပိုင်းအခြားတော့ ရှိရမယ် ထင်ပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ ဒါတွေကို ဘယ်သူတွေ ဖတ်သလဲဆိုတာပါပဲ။ ပစ်မှတ် ပရိသတ် (target audience) ရဲ့ ဂုဏ်ပုဒ် လက္ခဏာတွေ ဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာ တကမ္ဘာလုံးအတွက်ပြောရရင် စာအုပ်ထွက်တာက များလိုက်တာ။ အားလုံး ကောင်းပါတယ်လို့ ဘယ်လိုမှ အပြတ်ပြောလို့မရပေမယ့် ကောင်းတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ မြန်မာ စာဖတ် ပရိသတ် တွေနဲ့လည်း လိုက်ဖက် တာတွေ အများကြီးပါ,ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာတွေဟာ ဘာသာပြန် ချည်းပဲဆုံးတန်းမရှိ အားကိုးနေ
ကြတော့မှာလား၊ လူဦးရေ သန်း ၅ဝ ကျော်ရှိတဲ့အထဲ ဘယ်လောက် မြန်မာစာ တတ်ကြသလဲ။ သူတို့အားလုံး မဟုတ်တောင် အများစုက ဘာသာပြန်တွေ ဖတ်ဖြစ်ကြရဲ့လား။ ကိန်းဂဏန်း အတိအကျ အသိရပေမယ့် များတော့ များမယ် မထင်ပါဘူး။ ဒီတော့ အကြောင်းအရာတခုကို အမျိုးသားရေး လိုအပ်ချက်အနေနဲ့ ဆိုပါတော့။ မဖြစ်မနေ လူအများဆီရောက်ချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ ပညာအဆင့်အတန်း သိမှုပညာ (knowledge) ကို များအောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို ဘယ်လို ပေါက်မြောက် အောင်လုပ်မလဲ။ ဥပမာ အခုခေတ်
ကလေးတွေဟာ သိပ္ပံတတ်မှု အလွန်နည်းပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဘာသာပြန်တွေ လိုမှာတော့ သေချာတယ်။ ဒီတော့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ ဘယ်သူတွေ ပြန်မှာလဲ၊ အမြတ်အစွန်း အကျိုးမရှိလျှင် လုပ်ကြမှာလား။ လုပ်ပြီဆိုပါတော့၊ ရောက်စေချင်တဲ့ ပရိသတ် ကလေးငယ်တွေဆီ ရောက်အောင် ဘယ်လိုပို့ပေးမလဲ။
ဒါကြောင့် အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းတခုကတော့ ဘာသာရပ် (subject) စာအုပ်တွေကို နဂိုမူလ ဘာသာနဲ့ ဖတ်နိုင်ရပါတော့မယ်။ ဒါကတော့ လက်တွေ့မှာတော့ အင်္ဂလိပ်စာ သွက်သွက်လက်လက် စာသွားသွား ဖတ်နိုင်ရတော့မယ်။ မူရင်း ဖတ်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပဲ။ ဒီလိုပဲ တ တိုင်းပြည်လုံး ဖတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမယ်။ မြန်မာ အိမ်နီးချင်း မလေးရှား မှာဆို ၄၉%သော တိုင်းသူ ပြည်သား တို့ဟာ အင်္ဂလိပ် စာကို ကောင်းကောင်း ဖတ်နိုင် ပြောနိုင်တယ်တဲ့။ ထိုင်းကတော့ ဒီလောက် ရာခိုင်နှုန်းရှိချင်မှရှိမယ်။ စင်္ကာပူ ကတော့ ပိုမှာပဲ။ ဒီတော့ မြန်မာတွေ အရေးကြီး တဲ့စာအုပ်တွေကို မူရင်းဘာသာ (အင်္ဂလိပ်)နဲ့ ဖတ်ဖို့ကောင်းကြပါပြီ။ ဒီအတွက်တော့ အင်္ဂလိပ်စာကို မြှင့်တင်ပေးရမယ်။ ဒါလည်း နှစ်မကြာခင်မှာ တိုးတက်လာမယ် ထင်ပါတယ်။ ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေမှာတော့ မူရင်း အဓိပ္ပာယ်မူမကွဲဖို့ လုံးဝဥဿုံ မလွဲဖို့လိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အမှားမရှိဖို့ အလွန့် အလွန် အရေးကြီးပါတယ်။ အချို့ စာအုပ်တွေမှာ အဓိပ္ပာယ် ကောက်ယူတာမှားလို့ နားလည်မှားလို့ ထင်ပါရဲ့။ အဓိပ္ပာယ်က ပြောင်းပြန် ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေ တာတောင် တွေ့ ရပါတယ်။ ဒါမျိုးကို လက် မခံ ကြပါနဲ့။ အကောင်းဆုံးက စာဖတ်သူ လက် မခံတာက အကောင်းဆုံး ပဲ။ ဒါဆို သူဆက်မရေးတော့ဘူးပေါ့။ မဟုတ်ရင်တော့ ထုတ်ဝေသူတွေက စိစစ်ရွေးချယ်ပါ၊ လုပ်ပေးပါလို့ အဆိုပြုချင်ပါတယ်။ ဒါဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အလုံးစုံပညာရေးကို ထိခိုက်တာမို့ မီးမောင်းထိုးပြရတာပါ။ အလွန်တရာ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ထပ်လောင်း ပြောပါရစေ။
စာအုပ် တွေကတော့ ဘာသာပြန် သူရဲ့တာဝန် မို့ထားပါတော့၊ ဆောင်းပါ တွေ ဘာသာပြန် ရာမှာလည်း အကျိုးကြောင်း ဆီလျော်မှုနဲ့
အတွေး အခေါ် အမြော်မြင်ပိုင်းကိုလည်း အလေးပြုဂရုထားထိုက်ပါတယ်။ ခပ်လွယ်လွယ်နဲ့ ဆောင်းပါးဖြစ်လာအောင် အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် မပြန်လိုက်ပါနဲ့။ စာဖတ်သူအတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုချင်း မတူပါဘူး။ ကျမယဉ်ပါးနေတဲ့ ကျန်းမာရေး ဆောင်းပါးတွေ မူတည်ပြီး ပြောရရင်
တော့ ဒီလို မြန်မာ စာဖတ်ပရိသတ်နဲ့ အပ်စပ်တဲ့ ကောက်ချက်ချမှု၊ ဝေဖန်မှုမပါကြပါဘူး။ အချို့ဆို အလွန်တရာမှ အံမဝင်ခွင်မကျဖြစ်နေပါတယ်။ ဥပမာ အစားအသောက်ဆိုင်မှာ brussel sprout နဲ့ broccoli ကို စားဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာ ပေါပေါလောလော နေရာတကာ
ရတာမို့ သူတို့ အခြေအနေနဲ့ ဆီလျော် ကိုက်ညီပါတယ်။ မြန်မာမှာတော့ brussel sprout ဟာ မရှိသလောက်ရှားပါတယ်။ အဆင့်မြင့် စူပါ
မတ်ကက်တွေမှာ ဈေးကြီးပေးပြီး ဝယ်ချင်ပါတယ်ဆိုတာတောင် မရနိုင်တာမျိုးပါ။ broccoli ကတော့ တခါတခါ စူပါမတ်ကက်တွေမှာ ရပါတယ်။ ဈေးထဲမှာလည်း ပေါ်နေပါတယ်။ အမြင်ပေါတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုဆိုရင် ဖြစ်ထိုက်တာက ဒါတွေဟာ သူတို့ဆီမှာ ဈေးပေါတယ်။ မြန်မာ
မှာတော့ ရှားလို့ ဝယ်လို့ သိပ်မလွယ် ဖြစ်နိုင်တယ်။ သူ့အစား စားသုံးနိုင်တာတွေက … လို့ဆိုသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောနိုင်အောင် အနည်းအကျဉ်း သတင်းထောက်လှမ်းတာတော့ လုပ်ရမှာပေါ့။ ဒါ စာရေးသူရဲ့ စေတနာက ဖေါ်ပြပေးနေတဲ့တာဝန် မဟုတ်လား။ လုပ်ကို လုပ်ပေးရမှာပါ။ မဟုတ်ရင် ထိရောက်မှုအားပျော့သွားပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ အဲဒီအထက်က ညွှန်းတဲ့ ဆောင်းပါးတွေမှာဆို ဓာတ်ပုံတွေလည်း မသင့်တော်တာတွေ များပါတယ်။ ဥပမာ တခု ထုတ်ပြရရင် အသက် ၁၂ဝ ကျော်နေနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးမှာ ထည့်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံပေါင်း ၄-၅ ခုကတော့ အားလုံး ပျိုမျစ်နုနယ်တဲ့ အမျိုးသမီး မော်ဒယ်လှလှလေးတွေပုံ၊ ဖေါင် (form) ကောင်းကောင်း ဒေါက်ကောင်းကောင်း၊ ရင်သား မောက်မောက် တင်က
ဖြိုးဖြိုး နိုင်ငံခြားသား အနောက်တိုင်းသူပုံတွေဖြစ်တယ်။ တယောက်က လူငယ်လူရွယ် တွေသုံးတတ်တဲ့ music player နားမှာ တပ်ထားတယ်။ နောက်တပုံက ဂေါက်သီးရိုက်နေတာ၊ ဒီပုံတွေ ဘယ်သူ့ကို ရည်စူးပြီး ထည့်ထားတာလဲ။ ၆ဝ-၇ဝ ကျော်တွေအတွက်တော့ မဟုတ်လောက်ဘူး။ ဒီလိုလူတွေ (အမျိုးသမီးဖြစ်စေ၊ အမျိုးသားဖြစ်စေ)က တို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးလို့ မှတ်ချက်ပေးလိုက်မှာအမှန်ပဲ။ ဒီတော့ စိတ်ဝင်စားမှု လျော့နည် သွားတယ်။ တို့သိစရာလိုတာတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ယုတ္တိမတန်လို့ ဆွဲဆောင်မှု မရှိဘူး။ အကြောင်းအရာတွေကို တကယ်နှလုံးသွင်းပြီး တကယ်လုပ်
ရမယ့် သူတွေအတွက် ရည်စူးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမှာ။ မဟုတ်ရင်လည်း ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှုမျိုး
ရှိရှိ၊ ရေးလိုက်တာပဲလို့ ဆိုချင်တာလား။
အခြား စဉ်ဆက်မပြတ် ပညာရှာဖွေနည်းများ
ခေတ်အလိုက် လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်စည်းပေးနေတဲ့ သင်တန်းတွေ အလွန်များနေပါတယ်။ ဒါက လိုတာရှိလို့ ပေးနိုင်အောင် ဖန်တီးထား
တာပဲ ကောင်းပါတယ်။ မဟုတ်ရင် ဘယ်ဘက် ကလှည့်ပြီး အကူအညီ တောင်းရမယ် မသိဘူး။ သိကြ တဲ့အတိုင်း အခုအချိန်က နိုင်ငံခြားသွားပြီး လုပ်ရတဲ့သူတွေ ခပ်များများပဲ။ တိုင်းပြည်တော်တော် များများ အထူးသဖြင့် ဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်တွေ ဒီလိုလုပ်လာကြတာ ကြာပါပြီ။ (service export) လို့ အမည်တပ်ထားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို ထွက်ကုန်သွယ် သဘောထားပြီး တိုင်းပြည်အတွက် နိုင်ငံခြားငွေရှာပြီး အလုပ်ဖြစ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ဒီဈေးကွက်ထဲ ဝင်လာတာ နောက်ကျပါသေးတယ်။
လက်လုပ်လက်စား လူတန်းစားထက် အထက်တန်းကျတဲ့ နိုင်ငံခြားထွက်မည့်သူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တိုင်းပြည်တွင်းမှာပဲ အလုပ်ရဖို့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ တတ်တတ်မြောက်မြောက် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် လုပ်နိုင်ဖို့ သင်တန်းမျိုး မွမ်းမံသင်တန်းဆိုပါစို့ တက်ကြရပါသေးတယ်။ ဒီသင်တန်း
တွေက အမျိုးအစားအားဖြင့် နှစ်မျိုးခွဲနိုင်ပါတယ်။
(၁) အထွေထွေသင်တန်းများ ဒီမှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများ ထိပ်တန်းက ပါ,ပါလိမ့်မယ်။ အင်္ဂလိပ်စာ၊ စကားကို အခြေခံလောက်မှ မပြောတတ်မဆိုတရင် အလုပ်မှာ မတွင်ကျယ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ ဆက်လက် သင်ကြရတာ။ နိုင်ငံခြားသွား အလုပ်လုပ်မည့်သူကတော့ ပိုလိုတာပေါ့။ ဒီထဲမှာ အထက်ကပုံဖေါ်ခဲ့သလို ကလေးငယ်တွေလည်း ပါ,ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဆက်လက် အစဉ်တစိုက် ပညာသင်ကြားရေး (continuing education) မျိုး မဆိုနိုင်တော့ပါဘူး။ တကယ့်အခြေခံပညာ သင်ယူရေး ဖြစ်သွားပြီး မိဘတွေအနေနဲ့ ဟာကွက်တွေ ဖြည့်ပေးတာဖြစ်တယ်။
(၂) သတ်သတ်မှတ်မှတ် ပိုမိုကျဉ်မြောင်းတဲ့ ဦးတည်ချက်များရှိတဲ့ သင်တန်းများ၊ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်ကိုင်တွယ်နိုင်မည့် ပညာနဲ့ အတတ်တွေ တိကျစွာသင်ကြားပေးခြင်းဆိုတဲ့ သင်တန်းမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းစာထဲမှာ အထူးသဖြင့် ၄-၅-၆ လအတွင်း များပြား
ထင်ရှားလာတာတွေ ဖြစ်တယ်။ ဘယ်လောက်စုံတယ်၊ ဘယ်လောက် အသေးစိတ်ကျတယ်။ သီးခြားထူးကဲတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ရှိတယ်ဆိုတာ သူတို့ကြော်ငြာတဲ့ စာသားတွေ ခေါင်းစဉ်တွေကြည့်မှ သိမှာမို့ အချို့ကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
- Engilsh Course
- Foundation English Program
- သူနာပြုအကူနှင့် ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း
- Capacity Enhancement Training Course
- စီးပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုမိတ်ဆက်
- ဆေးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်နှင့် ကွန်ပျူတာနည်းပညာတက္ကသိုလ် GTC/GTI ဝင်ခွင့်
တကယ်ပဲ လိုရင်းလိုအပ်ချက်ကို ကျဉ်းကျဉ်းမြောင်းမြောင်း ထဲထဲဝင်ဝင် သင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ စင်္ကာပူမှာ အလုပ်သွားလုပ်မယ့် အင်ဂျင်နီယာ
တွေအတွက် သင်တန်းတွေဖြစ်တယ်။ ဒီစာရင်းဟာ မဆုံးသေးပါဘူး။ ဒါတွေအားလုံး အထူးစပယ်ရှယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေဖြစ်လို့ ဒါမျိုးတွေလိုနေတဲ့ အလုပ်ရှာသူများအတွက် ကောင်းပါတယ်။ တိကျသေချာပြီး အသေးစိတ်ကျတဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေတာတွေပါ။ မြန်မာတွေဟာ ပြင်ပလောကနဲ့ ထိတွေ့မှုနည်းသူဆိုတော့ ဒီလို အချောသပ်သင်တန်းများမရှိရင် အလုပ်,လုပ်မယ့်သူတွေ နိုင်ငံခြားရောက်တော့ ခေတ်မဆန် လုံးလုံးနောက်ကျနေတာတွေ ချောမွေ့ပြေလည် မဖြစ်တာတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီသင်တန်းတွေရဲ့ တကယ်ထိရောက်မှုနဲ့ အောင်မြင်မှုကိုတော့ စနစ်တကျ ဆန်းစစ်ထားတာတွေ မတွေ့ရသေးပါဘူး။ သင်ကြားရမယ့် သူတွေအတွက် ကုန်ရမယ့်ငွေကတော့ များသထက်များလာမှာ အမှန်ပါပဲ။
အခြားပညာတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်နိုင်တာတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ငွေလည်း သိပ်မကုန်ပါဘူး၊ ဒါတွေကတော့ အသင်းအဖွဲ့အသီးသီးတို့က ပေးနေတဲ့ ဟောပြောမှု သင်တန်းများဖြစ်ပါတယ်။ နီးစပ်ရာတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ဘယ်မှာ ဘာတွေရှိမယ်ဆိုတာ စုံစမ်းပါ။ သတင်းစာထဲမှာလည်း ပါတတ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်လောကအတွက်ဆို မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းက ဒီလို ပညာပေးမှုတွေကို နယ်မြို့များ အပါအဝင် မှန်မှန် လုပ်ပေးနေ
ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာဆို စဉ်ဆက်မပြတ် ပညာပေးသင်တန်းတွေဟာ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ရှိနေပါတယ်။ တချို့တွေက ငွေကြေးပေးရတယ်ဆိုပေမယ့် အမြတ်အစွန်းယူတာမျိုးမဟုတ်လို့ အထူးသက်သာပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ အခြား အထူးပညာရှင် (professional) အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဗိသုကာ
အဖွဲ့ စတာတွေကလည်း အလားတူ သင်တန်းတွေ ပြောပြောပွဲတွေရှိတယ်။ ဝိဇ္ဖာသိပ္ပံ ပညာရှင်များအဖွဲ့ဆို အဆင့်မြင့်ဘာသာရပ်ဟောပြောမှုတွေ ရှိပါတယ်။ ပြပွဲတွေဟာလည်း ပညာရှာမှီးဖို့ရာ အဖိုးတန် အခါအခွင့်တွေဖြစ်တယ်။ ဥပမာ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ အကြောင်းအခြေခံရော အခြားကုသရေး၊ မပြန့်ပွားရေး နောက်ဆုံးပေါ်တွေ့ရှိချက်တွေ၊ သိနိုင်တာပဲ။ ဒါဟာ ဗဟုသုတတွင်မကဘဲ ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာ အသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်။
ဝါသနာအဖုံဖုံအတွက်ပေးတဲ့ ဟောပြောမှုသင်တန်းတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ - ပန်းစိုက်ခြင်း၊ ပန်းအိုး ထိုးခြင်း၊ ဒါတွေလည်း သူ့နေရာ
နဲ့သူ ပညာရှာမှီးရာမှာ အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါ ဘာသာပြန်စာတွေမကဘဲ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပညာအတွက် တတ်စရာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ မဟုတ်ရင်လည်း လိုနေတဲ့ သစ်ဆန်းနေတဲ့ ဗဟုသုတအတွက်လည်း ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာတော့ (Scientific Literacy) လို့ခေါ်တဲ့ သိပ္ပံပညာ တတ်မြောက်သိရှိရေးအတွက် ကြိုးပမ်းမှုတွေ ရှိရပါ လိမ့်မယ်။ မြန်မာ လူထုဟာ ဒီကဏ္ဍမှာ ပြည့်စုံ ဖူလုံခြင်း မရှိဘူး လို့ဆိုရမယ့် အခြေအနေ မှာရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ ခေတ်မီ တိုင်းပြည် ဖြစ်လာဖို့အရေး နိုင်ငံတကာအဆင့်မဆိုနဲ့ဦး၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနဲ့ ရင်ပေါင်တန်းလိုက်နိုင်ဖို့မှာ မြန်မာတွေ ကြိုးစားရမှာက အများကြီးပါ။ ပညာတတ် တယ်ဆိုရာမှာလည်း လက်တဆုပ်စာ အပေါ်ဆုံးက မလိုင်သကာ အလွှာကိုပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အလွှာတိုင်း အလွှာတိုင်းမှာ ပညာတတ် (Literate) ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ အထူးအလေးပေးရမှာတွေကတော့ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ သိပ္ပံဆိုင်ရာ အတတ်အသိများ (Scientific Literacy) ဖြစ်ပါတယ်။
ကျမတို့တိုင်းပြည်ကို အခြား သူတကာတွေနဲ့ ရင်ပေါင်တန်းနိုင်အောင် (knowledge-based society) ပညာကို အခြေခံထားတဲ့ လူမှုအဖွဲ့
အစည်းဖြစ်လာလိုရင် ကြိုးစားပြီး အနာဂတ်တိုင်းပြည်၊ အနာဂတ်လူငယ်တွေ မနစ်နာဖို့ အရေးအတွက် ကြိုးစားကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ပညာရေးမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ ဒီလို မြှုပ်နှံမှုမျိုးဟာ နောင်အခါမှာ အတိုင်းမသိကြီးမားတဲ့ အကျိုးအမြတ်မျိုး ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ရင်းနှီး ရာမှာလည်း အထက်က ပြောခဲ့သလို ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး အလွှာပေါင်းစုံ ကျား၊ မ မခြား ပါရပါမယ်။ ကျမတို့တိုင်းပြည်အတွက်တော့ နောက်ကျပေမယ့် တခြား
တိုင်းပြည်တွေကို အမီလိုက် ကျော်လွန်သွားဖို့ဆိုတာ ပညာရေးကိုပဲ အဓိက အားကိုးရပါတော့မယ်။ သတိဖြစ်ကြပါစေ၊ ဝီရိယ စိုက်ထုတ်နိုင် ကြပါစေ၊ အချိန် မလင့်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
(ဒေါက်တာ မြင့်မြင့်ခင် )
credit ; www.komothee.blogspot.com.
( Ko Myo )